केपी ओलीको ओँठे जवाफको भर पर्दापर्दै पार्टी औपचारिक विभाजनमा जानुपर्ने स्थितिमा पुगिरहेको बेला प्रचण्डकै मुखबाट केपीशैलीमा जवाफ निस्किएपछि केही नेताले अचम्म मानेका छन् । अस्ति सोमबार पेरिसडाँडामा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा पूर्वएमालेतर्फका नेता डा.विजय पौडेल जुरुक्क उठे । त्यसबेला अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्षता ग्रहण गर्दै मन्तव्य दिइरहेका थिए । डा. विजय तलैबाट बोल्न थाले, ‘तपाईंहरूले सहमति जुटाउन नसकेको वा अरु केही समस्या परेको हो ? महासचिवबिना बैठक कसरी बसिन्छ ? त्यसैले यही बैठकबाट महासचिव छानौँ । यसरी कति दिन चल्छ ?’ विजय बोलिसकेर थचक्क बसे ।